Garaadso Intaadan Guursan.Qaybta | 1aad – dhugasho
maxamedsheekafguun Nofeembar 23, 2018 sheekooyin
Garaadso Intaadan Guursan.Qaybta | 1aad
Mubarak Mahamud Saleban
Waxaa hubaal ah, gabadh iyo wiil kastoo guurdoon ah, oo maanta dunida guudkeeda jooga inuu ku haminayo siduu ku heli lahaa ama ku hanan lahaa qof wanaagsan oo ay nolosha wada qaybsadaan.
Waxaa hubaal ah haddaad tahay guurdoon, in aad dooneyso qof aad nolosha macaankeeda isla qeybsataan, qof aad mugdiyada nolosha aadamaha soo foodsaara iska weheshataan, qof aad isku noqotaan muraayad oo midba midka kale isku daawado, qof uu Eebbe idin kala siiyo awlaad aad ku indho qabowsataan, qof aad nolosha inta idiinka dhiman iska soo ag toostaan, iyo weliba qaar kaloo badan oo aanan qoraal kaga soo gayoon karin.
Run ahaantii, waa nolol dhan oo aan qoraal lagu soo koobi karin. Hadaba waxaa is weydiin mudan, sidee lagu helaa qof wanaagsan? Inta aanan idiin far fiiqin qofka wanaagsan sida lagu helo ama dadka lagaga garto, aan ku weydiiyo su’aal. Guurdoonyahow dhowrsani maxaad ku dooran lahayd gacalka aad dooneysid xitaa hadduu Rabbi idin gaarsiiyo 100 sano inaad iska soo ag toostaan?
Waa su’aal da’weyn oo dadka guurdoonka ah qaar badan oo ka mid ihi jawaabteeda saxda ah ay hareer maraan. Waa arrin inta badan qofka guurdoonka ah ay ka qariyaan wax yaabo kale oo dhalanteed ah. Waa su’aal u baahan in uu qofka guurdoonka ah, waxbadan ka fiirsado jawaabteeda; islamarkaana uu isku dayo in ay bal jawaabtiisu tahay mid guul u horseedi karta.
Maanta waxaan joognaa wakhti ay noloshii isbeddashay, wakhti ay dadkii isku ekaadeen, oo qofka xun iyo kan fiican ay adagtahay inaad kala garatid, wakhti is aaminiddii ay yaraatay. Hadduu Rabbi idmo waxaan qormadaydan kaga jawaabi doonaa su’aalo dhowr ah, oo ay ka mid yihiin:
1. Maxaa la’iiga baahanyahay inaan noqdo inta aanan raadin qof wanaagsan?
2. Sideen u doortaa gabadh wanaagsan, maxaanse ku doortaa?
3. Waa maxay calaamadaha lagu garto gabadha wanaagsan?
… iyo weliba talooyin badan, oo ku aaddan sidaad u abuuri lahayd geed hadh weyn oo islamarkaana miraha kaaga baxaa ay yihiin kuwo macaan.
Qorrof dhurwaa iyo qandi libaax